Shirt Manufacturers - Shirt mpamatsy & orinasa
Marika CHECKEDOUT Item Code CM1102Z059000T4 Lehibe S-3XL Ny teny fanalahidy ho mpitafy fanamiana, fanamiana akanjo, akanjo antsasaky ny volon-tànana, lobaka waiter, lamba vita amin'ny lamba 60/40 poly / cotton GSM 143g Fanjairana Thread Polyester kofehy koa antsoina hoe kofehy matevina. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny heriny avo, ny fanoherana ny abrasion tsara, ny fihenan'ny rano, ny hygroscopicity tsara ary ny fanoherana ny hafanana, ny haona polyester dia manohitra ny fanoherana ...
Akanjo fihazonan-damba fohy palitao miaraka amina paosy iray amin'ny tratrany ankavia CW1109D115000AM
Marika CHECKEDOUT Item Code CW185D5901H Ferana S-3XL Ny teny fototra dia fanamainty mpitaiza, fanamiana mientanentana, akanjo vita amin'ny akanjo vita amin'ny poleta 65/35 poloney / landihazo Xinjiang Aksu vita amin'ny landy lava, tsy misy ondana, tsy mihemotra, tsy misy karazan-tsaboina, fotoam-panompoana in-2 toy ny akanjo chef mahazatra. Ny manjaitra Thread Polyester kofehy koa dia antsoina hoe kofehy matevina. Matetika (antsoina hoe jiro) no iantsoana azy matetika. Iza no mitafy volo sy mihena, ary azo antoka simika. Noho ny tanjany avo, tsara abrasio ...